गुण्डा नाइकेको भर परेर धन कमाउने सपना त जसोतसो पूरा होला तर डन मारिएपछि सम्पत्तिको किचलोका करण केही न केही नवधनाढ्यले मरेतुल्य हुने दिन आउँदै छ । प्रहरी इन्काउण्टरमा मारिएका कुमार घैँटे र दिनेश अधिकारी (चरी) का सम्पत्ति उनीहरू बाँच्दाभन्दा मरेपछि घाँडो बनेको छ, तिनका पार्टनरको निम्ति । यसैमध्येको एउटा प्रसंग हो, काठमाडौंसँगै जोडिएको धादिङको । भारतीय नकाबन्दीलगत्तै नेपाल आयल निगमले सातै प्रदेशमा इन्धन भण्डारण… विस्तृत समाचार
​टाउको फुटाउने, पैसो उठाउने
गत वर्षको तुलनामा कर राजश्वको हिसाब गर्दा अहिले ३० प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । राजश्व सचिवमा उपराष्ट्रपति कार्यालयबाट लालशंकर घिमिरे गएका छन् । उनी मन्त्रालयमा बहालीलगत्तै अनुगमनका लागि नयाँ तरिका अपनाइएको छ । कर्मचारीलाई दिइएको पत्रमै ‘राजश्व सचिवज्यूको निदेशानुसार’ लेख्ने गरिएको छ । त्यसरी खटिएका कर्मचारीले कुनै पनि बेला ठूला व्यापारिक गृह, थोक पसल र शहरका मुख्यमुख्य व्यापारिक स्थलमा छान मार्न थालेपछि व्यापारी त्राही–त्राही छन्… विस्तृत समाचार
शक्तिशाली पार्टी, अपार जनादेश र सुदृढ संगठन भनेर मात्र के गर्नु, चालामाला बिग्रेपछि भताभुंग हुन केही बेर नलाग्दो रहेछ । सबैले ‘हाम्रो र राम्रो’ हेर्दा विभिन्न गुटभित्रका पनि उपगुट समस्यामा परेका छन् । जस्तै, रामबहादुर थापा (बादल) सहितको समूहले वैद्यसँग विद्रोह गरेपछि त्यताबाट जो–जो आए, तिनका नेता उनी बन्नु स्वाभाविकै हो । अहिले पनि बादलले नियमित भेट्ने र घनीभूत छलफल गर्ने भनेको तिनैसँग हो ।… विस्तृत समाचार
​खेलाँचीमै प्यारो ज्यान खत्तम
कोही मान्छे एक्कासी भित्र छिरी ठुल्ठूलो आकारको डल्लो चिज लगेर काउन्टरमा राख्छ र ‘बम ! बम !’ भन्दै भाग्छ । तर, पत्याओस् कसले ? कहिलेकाँही मान्छेको काल कसरी टर्छ भने, सोच्न पनि नसकिने । शुक्रबार साँझ ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल मुख्यालयमा बम राखिएको प्रसंग हो यो । घटनापछि एनसेलको सिसिटिभी फुटेज अध्ययनका क्रममा त्यस्तो दृश्य देखिएपछि प्रहरीले एकजना गार्डसँग सोधपुछ गरेको थियो । ती गार्डले भनेका… विस्तृत समाचार
नेपालमै उत्पादित तरकारीजन्य सामग्री वितरण संयन्त्र सरकारले बनाउन नसक्दा किसान र उपभोक्ता अकल्पनीय मारमा परिरहेका छन् । कतिसम्म कमिसनखोरी र बद्मासी हुने गरेको छ भने किसानले ५/७ देखि ८/१० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बेच्ने तरकारीजन्य उत्पादन उपभोक्तासम्म आइपुग्दा ८०/९० देखि २ सय रूपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । तराईको कुनै किसानले तरकारी फलाएपछि सबभन्दा पहिले खरिदकर्ताको रूपमा बिचौलिया नै पुग्छ । उसले सस्तो मूल्यमा तरकारी खरिद गर्दछ र… विस्तृत समाचार
केन्द्र र प्रदेश सरकारले एक वर्ष पूरा गरेपछि कुरा बुझेर होला, उपेन्द्र यादव अब राजपासँग हैन, नेकपासँगै साझेदारीमा अगाडि बढ्ने मुद्रामा छन् । केन्द्रमा बढी लाभ पाउनका लागि यस्तो रणनीति अबलम्बन गरेको बताइन्छ । उपेन्द्रको यस्तो योजना रहेपछि यसबाट सोझै पीडित हुने भए, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दी । उनले यसबारे जनकपुरमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । संयोगले अहिले जनकपुरमै राजपाको बैठक पनि… विस्तृत समाचार
​मान्छेमा मिलेको मन
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र तिनका व्यावसायिक संघ÷संस्थाप्रति सकारात्मक नदेखिएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टका कामप्रति व्यवसायीहरु भने मक्ख छन् । गरिबहरुलाई सकेसम्म धेरै ठग्ने व्यवसायीको शैलीका कारण मन्त्री उनीहरुप्रति सकारात्मक नभएपनि वैदेशिक रोजगार कम्पनी सञ्चालनका लागि तोकिएको नगद र बंैक धरौटीको निर्णयका कारण व्यवसायीहरु उनीप्रति दंग भएका हुन् । कम्पनी सञ्चालनका लागि २ करोड नगद र ४ करोड बैंकिङ धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव… विस्तृत समाचार
​फाइदा हुनु त यस्तो
दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को भविष्य अब के हुन्छ ? कुनै टुंगो छैन । तर, यही नाममा खेलोफड्कोचाहिँ बाक्लिएको छ । सन् १९८५ मा राजा वीरेन्द्रसमेत अग्रसर भएर गठन भई त्यसको सचिवालयसमेत काठमाडौंमा राखिएको थियो । सन् २०१४ मा नेपालमा सार्क सम्मेलन गराईवरी राजदूत भएर अफ्रिका गएका अमृत राई फर्किएर अर्को पोष्टिङमा गइसके । कालिप्रसाद पोखरेल, यज्ञ हमाल, अम्बिका लुइँटेल, खगनाथ अधिकारीहरु सार्क… विस्तृत समाचार
​अब त्यहाँ चल्छ कसरी ?
ठूलै हल्लिखल्लीका साथ गृहबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयतिर सारिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा झनै भद्रगोल देखिएको छ । तीनजना अतिरिक्त प्रमुख (एआइजी) को दरबन्दी थियो । त्यसमध्ये गणेश अधिकारी गत महिना प्रमुखमा नियुक्त भए । उनले सम्हालेको प्रशासनमा यदु खरेल पुगे । यादव रेग्मी थिए, सातै प्रदेशको सूचना संकलन गर्ने विभागमा । एआइजीको तीन दरबन्दी काटिएर एउटा कायम भएपछि अब यादवको हैसियत के हुन्छ ? दरबन्दी नभएको नाममा… विस्तृत समाचार
​आफ्नै ३ वटा डम्म ओथारो
अहिले पनि काठमाडौंको आकाशमा जहाजहरु होल्ड भएर बस्ने समस्या कायमै छ । यसरी आकाश नै जाम हुने समस्याले गर्दा दुःखचाहिँ स्वदेश–विदेश दुबैतिरका यात्रुले व्यहोर्नुपरेको छ । विदेशबाट आउने विभिन्न जहाजले कारणवश यहाँ ओर्लन पाएनन् भने ती भारतका लखनऊ, कोलकातातिर डाइभर्ट हुनुपर्छ वा यहीँको आकाशमा केही समय फन्को मार्नु पर्ने हुन्छ । जसो गरे पनि इन्धन खपत बढ्ने नै भयो । अरू देशका त ढाका र… विस्तृत समाचार